शीर्ष 10 उत्तम होटलहरू 4
fukuoka होटल: सुविधाहरू
fukuchok टापु शीर्ष होटलहरू
होटल हुन सक्छ कि हाउस फुकुक (माई घर रिसोर्ट)
प्रीमियर निवास फिसु क्वेय Qoocled खाज ASW, JW मारियल फियरमेड बेयूड बेम रिसोर्ट र PUB TAGE SONTESE को सूची पूर्ण सूची देखाउनुहोस्:।
रिसोर्ट्स ग्रुपेल डिस्कोली डिभिल डिभिल क्वावेसी, डीसट राजकुमारी चाँदी चम्मच फाउन्डेड फ्युक क्विबहरू बीच फोर-पकाउन्ट शहरहरू बीच लोकप्रिय छन्। पूर्ण सूची देखाउनुहोस्:।
Phu-Co Phu-COUT टापु: Vinpearl खोजवर्ती परिष्कृत Puincel खोज हरीको डिस्विल putu क्वाहिंसी र सालिय रिसोर्ट फाइंग फ्यूज क्वॉक टापु। पूर्ण सूची देखाउनुहोस्:।
अव्युमन होटेलहरू डन्ग दा ang एयरपोर्टको नजिकै: समुद्री किनार गाउँ क्वेक, बाच गा ung ्ग फाइल क्विनर रिसोर्ट र Vinpearl खोज हरीको डिस्कोन पूर्ण सूची देखाउनुहोस्:।
Phu-Co Phu-Co Phu-Sypu अनुकूल होटल, प्यारास्ल् पी क्वेक्स द्वारा सोल प्यारी फिस क्वेइक रिसोर्ट र टी & T रिसोर्ट पूर्ण सूची देखाउनुहोस्:।
<< p> म फुकुकामा होटलहरूको बारेमा कुरा गर्दैछु: सुविधाहरू, मूल्यहरू, म विभिन्न मूल्यका कोटिहरूमा फिकुकाका होटलहरू सिफारिश गर्दछु।
पर्यटक समीक्षामा Fukuok द्वीप (भियतनाम) मा 15 भन्दा राम्रो होटल
। यदि तपाईं पर्यटकहरूमा उडान गर्न रुचाउनुहुन्छ भने, प्रत्येक होटेल अन्तर्गत तपाईंले यस होटेलमा भ्रमण गर्न लिंक पाउनुहुनेछ।
होटल Vinels कान्छो भाईको नजिक एक विशाल होटल जटिल छ। होटेलसँग तपाईंले trails ताराहरूको लागि आवश्यक सबै चीज छ: पौंडी पोखरी, स्पाओल, फिटनेस केन्द्रहरू, मसाज, बच्चाहरूको लागि मनोरन्जन, मनोरन्जन र नानीबाट।
त्यहाँ लुगा धुने र टिकट अफिस छ, तपाईं भ्रमण किन्न सक्नुहुनेछ, जस्तै जंगली जनावरहरूको साथ सफ्टरिस। फिकुकाका (भियतनाम) मा होटल भेपरल (भियतनाम) टापुमा परिवार बिदाका लागि उत्तम विकल्पहरू मध्ये एक हो। बच्चाहरू आकर्षणहरू र चिडियाखानाहरूको फ्लीटमा रमाउनेछन्।
माई घर शान्त बीच रिसोर्ट हो। पाहुनाहरू बंगलालमा अवस्थित उष्णकटिबंधीय बगैचामा अवस्थित छन्। होटल एक विलासी दृश्य प्रदान गर्दछ। त्यहाँ रेस्टुरेन्टहरू र spea नुनहरू छन्। होटल आदर्श हो जो शान्ति र गोपनीयता खोज्दै छन्: परिवारहरू, जोडीहरू र सोलो यात्रीहरू।
फ्राइल फार्म, एक मोती फार्म, जहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि ऑयसलालीहरूले कसरी भविष्यको मोतीहरू परिचय गर्छन्।
Siamee खाडीमा उष्णकटिबंधीय टापु सबैभन्दा लोकप्रिय भियतनाम रिसोर्टहरू मध्ये एक हो। हामी पहिलो रेखामा फुकुकामा उत्तम होटेलको बारेमा बताउँछौं, जसमा पर्यटकहरू रोक्न चाहन्छन्।
3-स्टार होमलहरू धेरैमा धेरैमा धेरै मन पराउँछन्, तर यो रिसोर्टलाई उत्तम रूपमा मानिन्छ। पर्यटकहरूले उहाँलाई प्रशंसा गर्छन् रसिदियन बोल्ने कर्मचारी, दैनिक सफाई, सुन्दर इलाका र रमाइलो साना चीजहरूको लागि उहाँलाई प्रशंसा गर्छन्। होटलको ठूलो बाहिरी पोखरी छ, र प्रत्येक कोठामा यसको आफ्नै ट्यान टेरेस छ, जहाँ बेलुका गर्मीबाट आराम गर्न खुशी हुन्छ। समुद्र तट 120 मिटर टाढा छ।
यो राम्रो shoop स्टार होटेल fukuoka मा स्टार होटल एक उष्णकटिबंधीय प्रमोदवना हो। सानो बंगलून हरियोता र रंगहरूमा डुबेको छ, प्रत्येकको बगैंचामा हेर्दै। समुद्र तट बा Kao समुद्र तट minutes मिनेट छ। तपाईं एक उच्च स्तर प्राप्त हुनेछ र अधिकतम सुविधाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ! काठको जाल, सेवा, पूल र हरियो क्षेत्रको साथ काठको फर्निचर सहित बंगलून जस्ता पर्यटकहरू जस्ता पर्यटकहरू।
fukuok मा यो राम्रो होटल पहिलो लाइन मा छ। उसको पृष्ठ -5- minutes मिनेट पैट्दै बालुवा बिचमा फ्यान्ग लीग। कर्मचारीहरूले निरन्तर इलाकाको हेरचाह गरिरहेका छन्, त्यसैले हाँसो र पोखरी एक सुन्दर उष्णकटिबंधीय सागले घेरिएको छ। होटल आरामदायक र फेश स्वादिष्ट हो। नजिकै धेरै कम-लागत क्याफेस र रेस्टुरेन्टहरू पनि।
यो fukuoka मा सबै भन्दा राम्रो - स्टार होटल हो! जंगल भिलाहरूमा लुकाइएको, बालुवा समुद्र तट, एक राम्रो स्पा केन्द्र, एक सुरम्य क्षेत्र र पोषण "- तपाईं ठीक एक carefree छुट्टीको आनन्द लिनुहुन्छ। प्रतिक्रियाहरूमा, तिनीहरूले लेखे कि उनीहरूले नगद जम्माका लागि सोध्न सक्छन् - $ 40400।